Olee otú igwu egwu na tọghata MTS faịlụ na VLC t
Olee otú igwu egwu na tọghata MTS faịlụ na VLC
Onye ọ bụla hụrụ na-ekiri fim, na otu onye nke kasị adaba ụzọ na-ekiri ihe nkiri bụ na kọmputa. Site na-ekiri na kọmputa gị, ị na-adịghị ka ọ pụọ ọzọ na-aga ka kacha nso sinima na-akwụ ụgwọ maka n'ọnụ ụzọ tiketi. E nwere ọtụtụ nke nkiri saịtị online na-enye gị ibudata ma na-ekiri fim na iwu, ụfọdụ pụrụ achọ ka ị na-akwụ ụgwọ, ma N'ezie ọ na-aga na-uru na ya karịsịa ma ọ bụrụ na ihe nkiri dị mma. VLC a maara na-otu nke kasị mma media Player na-ekiri fim. Nke a bụ n'ihi na VLC, na-adị mfe na-ekiri fim nke ọ bụla usoro na ndepụta okwu, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ekiri a mba ọzọ nkiri. Ma, ọ bụghị onye ọ bụla ese fim nri n'ihu ha na kọmputa-eji nke a software, ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị, ị kwesịrị ị na-agụ na na-amụta otú adaba iji VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ bụ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu MTS faịlụ kpọmkwem, ị ga-enweghị nsogbu na VLC, ebe a bụ Nduzi na otú obibi video faịlụ na MTS format iji VLC.
Nkebi nke 1: Olee otú igwu egwu MTS Videos na VLC
Nkebi nke 2: Olee otú iji tọghata MTS Videos na VLC
Nkebi nke 3: A Mma Alternative ka VLC Video Ntụgharị
Na-egwuri egwu video na VLC dị nnọọ mfe; -eso ndị a mfe iso nzọụkwụ na-enwe ike na-egwu ọ bụla videos gụnyere MTS faịlụ na VLC mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Download music si YouTube / ndị ọzọ music saịtị. b
Nzọụkwụ 1 Download Software
Ị nwere ike ibudata software nnọọ free! Otú ọ dị, nke a bụ nanị maka PC ọrụ, ndị ọzọ OS dị ka Mac apụghị-akwado site na nke a software.
Nzọụkwụ 2 ẹkedori Software na Open File
Mgbe nbudata na nwụnye a mere, nanị ẹkedori software na pịa Media bọtịnụ na elu n'aka ekpe nke window, a menu nhọrọ ga-apụta si n'ebe họrọ Open File ...
Nzọụkwụ 3 Họrọ MTS File Ị Chọrọ Iji Play
A faịlụ nchekwa ga-ahụ na-egosi. Chọta na ọnọdụ nke MTS faịlụ na ị chọrọ na na na VLC media ọkpụkpọ. Were mara na ị naanị igwuri egwu, otu video na a window na oge.
Nzọụkwụ 4 Enwe Movie
Mfe dị ka nke ahụ! Ị nwere ike ugbu a na ihe nkiri na ị chọrọ ile mgbe ọ bụla ị chọrọ!
Alternative Method: Ị nwekwara ike igwu mfe egwu ị MTS faịlụ site na-achọta kpọmkwem faịlụ ị chọrọ igwu, nri-ịpị ya ma họrọ Open na> VLC media ọkpụkpọ.
NDỤMỌDỤ: I nwekwara ike ịgbakwunye ndepụta okwu na ọ bụrụ na ị na-amasị site na ịga na sobtaitel> Tinye Ndepụta Okwu File ...
A otutu VLC ọrụ ndị maara nke a, ma wezụga ịbụ a mgbasa ozi ọkpụkpọ, ị nwekwara ike iji ya dị ka a video Ntụgharị. N'ihi ya, i na-eche otú ime nke a, na-agụ ndị nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka n'okpuru iji mara ya.
Nzọụkwụ 1 Launch VLC na Họrọ iji tọghata
Ẹkedori VCL na site na menu panel, pịa Media button mgbe ahụ> tọghata / Save ...
Nzọụkwụ 2 Pịa Tinye Button
Otu Open Media window ga-apụta, na-amalite, pịa Add ... bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3 Họrọ MTS File iji tọghata
Chọta na ọnọdụ nke MTS faịlụ na ị chọrọ iji tọghata wee họrọ ya na pịa Open bọtịnụ na ala ịgbakwunye ya.
Nzọụkwụ 4 Pịa tọghata / Save Button
Mgbe faịlụ bụ ugbua choses, pịa tọghata / Save bọtịnụ na ala akụkụ nke window ka foto na-egosi.
Nzọụkwụ 5 Họrọ Atọrọ n'ihi na gị Video
N'okpuru ebe ntọala ngalaba, na-aga na profaịlụ ma pịa dropdown ndepụta na-enwe ike ịhọrọ nke preset ị chọrọ ka gị video.
Nzọụkwụ 6 Họrọ mmepụta n'ihi na gị video
Pịa ngwaọrụ icon na akara na profaịlụ, ihe mmepụta nhọrọ ga-egosi ebe ị na-enwe ike ịhọrọ nke faịlụ na ị chọrọ iji tọghata gị MTS faịlụ ka.
Nhọrọ: I nwekwara ike na video na ọdịyo codec na kwa ndepụta okwu site na ịpị ọzọ taabụ.
Nzọụkwụ 7 Họrọ Destination n'ihi na gị na File
Pịa agagharị button ma na-achọta ebe ị chọrọ ịzọpụta gị faịlụ. Si ebe a ị nwekwara ike ịtọ nke aha ị chọrọ na-etinye na ya na pịa Save mgbe mere.
Nzọụkwụ 8 Malite converting
Mgbe ihe nile anya ọma, pịa Malite bọtịnụ na ala akụkụ nke window na akakabarede ga-amalite.
Nzọụkwụ 9 Chere maka akakabarede rụchaa
Dị nnọọ na-eche maka ihe mmịfe iru ọgwụgwụ, mgbe ọ ruru ọgwụgwụ, ọ na-egosi na akakabarede bụ imecha.
Iji VLC iji tọghata video faịlụ nwere ike-ezuru gị dị ka ọ dị ya ọrụ zuru okè iji tọghata faịlụ formats n'ihi gị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji video converting software na bụ ụzọ mma karịa nke a, ị nwere ike na-aga n'ihi Wondershare Video Converter Ultimate. N'adịghị ka VLC video Ntụgharị, Wondershare Video Ntụgharị nwere isi edezi mma nke-enye gị ohere welie n'ozuzu ọdịdị gị video, na ị na-nwekwara wider nhọrọ nke usoro ị nwere ike tọghata gị faịlụ ma ọ bụ site.
Ya mere nke dị mma, VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ Wondershare Video Converter Ultimate? N'okpuru ebe a bụ n'akụkụ site n'akụkụ tụnyere maka ihe abụọ software mmemme na-enye gị ohere iji tọghata MTS video faịlụ ndị ọzọ faịlụ Ọkpụkpọ, atụmatụ-ihe.
Otutu Nchigharị ✓ ✗
Ebuli maka otu Devices ✓ ✗
Ebuli Video Ịkekọrịta ✓ ✗
Video edezi ✓ ✗
Na-enyefe Files ọ bụla Video edezi Software ✓ ✗
Ekwe ka Video Download si Internet ✓ ✗
Ọkụ Video faịlụ ka CD ma ọ bụ DVD ✓ ✓
Ikuku Ngakọrịta ✓ ✗
Play Video Mgbe converting ✓ ✓
N'ime na tebụl n'elu, o doro anya na mgbe ọ na-abịa converting, Wondershare Enwee Mmeri. VLC nwere ike ịbụ ezigbo mgbasa ozi ọkpụkpọ, ma mgbe ọ na-abịa converting video Wondershare bụ ụzọ na-aga.
Wondershare Video Converter Ultimate Doro anya na-enye ihe arụmọrụ karịa VLC site na-ejuputa ya ngwa na ọtụtụ ndị ọzọ na amara atụmatụ na budata mma ya arụmọrụ na VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ na-enweghị.
> Resource> VLC> Olee otú iji Play na tọghata MTS Files na VLC